शिक्षामा नयाँ अभ्यास सुरु गर्नेछु |
शिक्षामा नयाँ अभ्यास सुरु गर्नेछु
प्रकाशित मिति :2017-12-01 10:09:59
केन्द्रीय अध्यक्ष, एन—प्याब्सन
छैटौं महाधिवेशनबाट एन—प्याब्सनको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनु भएको छ । आफ्नो जितलाई कसरी लिनु भएको छ ?
म लामो समयदेखि यस संस्थामा आबद्ध रही आएको छु । मैले यसअघि महासचिवको पदमा २ कार्यकाल पनि पूरा गरिसकेको छु । पहिले नै जुन संस्थाको लागि काम गरेको हो त्यसमा नै जित हासिल गर्नु सामान्य नै लाग्दैछ । किनभने आखिर संस्थाका लागि काम सधैं गरेको छु र गरिरहन्छु । यो कुनै लाभको पद होइन । यहाँ कुनै लोभ गर्ने कारण छैन । अब पहिलाभन्दा जिम्मेवारी झन् बढेको हुनाले काम पनि धेरै गर्ने सोचका साथ अघि बढ्दैछु ।
एन—प्याब्सनको अध्यक्षको हैसियतले निजी विद्यालयको विकासमा तपाईको योजनाहरु के—के छन् ?
निजी शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सर्व प्रथम बालबालिकाको हकहितका लागि सोच्नुपर्छ । बालबालिका सधैं पहिले हुनुपर्छ । विद्यालयले के गर्दा विद्यार्थीको हित हुन्छ त्यो कामलाई अग्रपंक्तिमा राख्नुपर्छ । विद्यालयको पठनपाठनको कुरामा पनि पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन आएको छ । पहिला शिक्षामात्र आवश्यक थियो भने हाल बालबालिकाको समग्र विकासमा पनि जोड दिइन्छ ।
बालबालिकालाई भविष्यका कर्णधार भनिन्छ । तर हाम्रो कार्यक्रमहरुमा उनीहरुलाई साझेदार बनाउँदैनौं । उनीहले पठनपाठन गर्न पाउने अधिकार लगायत अन्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा मेरो जोड हुनेछ । विद्यालयलाई बालबालिकाका लागि शान्ति क्षेत्र मानिन्छ । तर देशमा केहि भयो भने सबैभन्दा पहिला विद्यालय नै मर्कामा पर्छ ।
सबैभन्दा पहिला विद्यालय नै बन्द हुन्छन् । विद्यालय कम प्राथमिकतामा परिरहेको छ । यसमा हामी सबै दोषी छौं । यसका साथै एन—प्याब्सनमा हाल २५ सय सदस्य विद्यालय छन् । मैले ती सबै सदस्य विद्यालयवीच को दूरी घटाउने कुरामा जोड दिनेछु । हालै प्रदेश कम्यूनिटी पनि गठन भएको छ । अब जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रिय समितिवीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने कुरामा जोड दिनेछु ।
साथै बालबालिकालाई अझ विकसित बनाउनका लागि आवश्यक तालिम, कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्नेछु । यसका लागि शिक्षकहरुलाई प्रदान गरिनुपर्ने तालिम पनि प्रदान गरिनेछ । सरकारले लक्षित समूहका विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नियम ल्याएको छ । हामी निजी क्षेत्रले विद्यालय तहमा त्यो सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छौं तर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने बेलामा निजी विद्यालय पढेकै कारणले उनीहरुले सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको परीक्षामा पनि सामेल हुन पाउँदैनन् ।
हामीले विद्यालयमा उनीहरुलाई अधिकार प्रदान गर्छौं तर पछि गएर उनीहरुलाई त्यो काम लाग्दैन । यो कुरा सुधार गर्नमा पनि हामी जोड दिनेछौं । यस्तै शिक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धेरै विषयहरु छन् । सरकारले हामीलाई पनि त्यसतो कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराएर लानुपर्छ ।
हामीलाई पनि आफ्नो भनाई राख्ने मौका प्रदान गर्नुपर्छ । सरकारले त्यसमा संस्थागत विद्यालयमध्ये एकलाई मात्र समावेश गर्ने भनेको छ । यसरी कुरा प्रष्ट हुँदैन । यसको साटो छाता संगठनले सिफारिस गरेमध्ये एकलाई समावेश गर्दा सबैको हित हुन्छ । विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्ने कुरालाई भोलि गर्ने, पर्सी गर्ने भनेर टार्न मिल्दैन ।
जुन समयमा उनीहरुलाई जे आवश्यक छ त्यो प्रदान गरिनुपर्छ । आजकलको विद्यार्थीको स्वाद पनि फेरिएको छ । त्यसैले हामीले त्यसै अनुकुल
पाठ्यक्रमलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । शिक्षाको नयाँ अभ्यास संसारभरिनै सुरु भएको छ । त्यसैले हामीले पनि विद्यार्थीलाई कसरी फरक र प्रभावकारी शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौं त्यो हेर्नुपर्छ ।
आधुनिक शिक्षामा आधारित पाठ्यक्रम निमार्ण गर्ने विषयमा तपाईको के योजना छ ?
हामी राष्ट्रिय पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । तर विद्यार्थीका लागि अनुकुल र आधुनिक शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड भने दिन्छौं । आजको आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निमार्ण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणालाई सरकारले समावेश गर्नुपर्छ । विभिन्न समयमा प्रदेश अनुसार भिन्न पाठ्यक्रम राखने कुरा पनि आउँछ । कतर यो हुनुभन्दा अघि त्यसले विद्यार्थीलाई भविष्यमा कुनै कार्य गर्नमा रोक लगाउँछ वा लगाउँदैन त्यो हेर्नुपर्छ । स्थानीय र राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । कुनै एक ठाउँमा आवश्यक पर्ने पाठ्यवस्तु अन्यमा त्यति आवश्यक नहुन सक्छ ।
विद्यार्थीलाई सीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्न कस्ता कदम चाल्नुपर्छ ?
कुनै समयमा शिक्षा मात्र आवश्यक थियो भने हाल सार्थक र सीपमूलक शिक्षा महत्वपूर्ण छ । शिक्षासँगै सिप पनि प्रदान गर्नका लागि पाठ्यक्रम पनि त्यस अनुरुप हुनु जरुरी छ । यससँगै दक्षा जनशक्ति पनि आवश्यक छ । शिक्षकको तालिममा ध्यान दिने र उनीहरुको तह बढाउनुपर्छ । शिक्षकहरुलाई समय र परिस्थिती अनुरुप चल्न सिकाउनुपर्छ । हामीले विद्यार्थीलाई शिक्षासँगै सिप पनि दिने कुरालाई नीति निर्माणमा समावेश गरेका छौं । शिक्षामा परियोजना र प्रायोगात्मक पक्षहरु पनि हुनु जरुरी छ ।
सरकारी तथा निजी विद्यालयका विद्यार्थी भनेर फरक व्यवहार गरिनु हुँदैन । यी सबै हाम्रा देशका बालबालिका हुन् र यिनीहरुको भविष्य उज्वल बनाउनका लागि पढाइरहेका छौं भन्ने सोच्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा गर्ने अथवा एकअर्काको खुट्टा तान्नेभन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले शिक्षामा व्यापारीकरण गरिरहेको आरोप छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
निजी श्रेत्रको मुख्य आयस्रोत भनेकौ नै विद्यार्थीले तिर्ने शुल्क हो । निजी शिक्षा क्षेत्रले शुल्क लिन्छ र शिक्षा सेवा प्रदान गर्छ । संस्थागत विद्यालयमा बढि श्रम र लगानी हुन्छ । यसतोमा प्रतिफलको आश गर्नु पनि सामान्य नै हो । तर यसको प्रतिफल कति लिन पाउने भन्ने मापदण्ड छैन । राज्यले निजी क्षेत्रको शुल्क महँगो र सस्तो भयो भन्नुभन्दा पनि यति लिन पाउने भन्ने नियम बनाउनुपर्छ । वैज्ञानिक रुपले शुल्क निर्धारण हुनु जरुरी छ । नेपालमा संस्थागत विद्यालयहरुको विकास भिन्न किसिमले भयो ।
विदेशमा सबै सरकारी विद्यालय विकसित छ र त्योभन्दा पनि धेरै सुविधा चाहिने अथवा उच्च आर्थिक स्रोत भएकाले मात्र निजी विद्यालयमा आफ्नो बच्चा भर्ना गर्छन् । तर हाम्रो देशमा हने खानेले मात्र नभएर हुँदा खानेले पनि आफ्ना बच्चा निजी विद्यालय पढाउँछन् । यसले गर्दा पनि शुल्कको बहश चलेको हो । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने १ जना विद्यार्थी बराबर राज्यको ढुकुटीबाट १३ सय रुपैयाँ तिरिरहेको हुन्छ भने निजीमा उक्त रकम अभिभावकले तिर्नुपर्छ । यसकारणले पनि सरकारीभन्दा निजी विद्यालयको शुल्क आफैंमा महँगो हुन जान्छ ।
निजी र सामूदायिक दुवै विद्यालयको विकास कसरी गर्न सकिन्छ ?
निजी र सामुदायिक विद्यालयको विकासका लागि एउटै थलोमा राखेर प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । यसो गर्दा दुवै ोत्रलाई एकसाथ विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रमा गलत प्रतिस्पर्धा गर्न रोक्नुपर्छ ।
सरकारी तथा निजी विद्यालयका विद्यार्थी भनेर फरक व्यवहार गरिनु हुँदैन । यी सबै हाम्रा देशका बालबालिका हुन् र यीनको भविष्य उज्वल बनाउनका लागि पढाइरहेका छौं भन्ने सोच्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा गर्ने अथवा एकअर्काको खुट्टा तान्ने भन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।
कक्षाकोठामा प्रवेश गरी प्रिन्सिपलकाे हत्या
एमबीबीएस अध्ययन शुल्क नबढाने
हिमालयन बैंकले दियो ५ वटा सामूदायिक विद्यालयलाई कम्प्युटर
बिदाको समयलाई विद्यार्थीहरुले कसरी सदुपयोग गर्ने ?
काठमाडौं/२९ असोज– भारतको नयाँ दिल्लीको अग्रहरा दसरहल्ली उपनगरमा रहेको हवानुर पब्लिक स्कुलमा कक्षा कोठमा पढाउँदै
काठमाडौं/२९ असोज– सरकारले एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क नबढाउने निर्णय गरेको छ । आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले
विवादका कारण रोकिएको रत्नराज्य विद्यालयको भवन बन्ने
विदेशी सम्बन्धनका क्याम्पसलाई कडार्इ गर्दै सरकार
२५ छात्रालाई साइकल वितरण
दशैं बिदामा पढौं यी १० पुस्तक
त्रिचन्द्र क्याम्पसको पुनः निर्माण गरिने
२०७७ भदौमा ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गरिने
४० हजार घुससहित पक्राउ परे शिक्षा समन्वय अधिकारी
‘नेका’ घोषणा दशैंपछि, रोक्न ‘इक्यान’को अन्तिम प्रयास, को आउँला नेतृत्वमा ?
छौंटौं अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै
माटो निकाल्ने क्रममा माटोको ढिस्काले पुरिएर ४ बालिका घाइते
अस्थायी शिक्षकको नतिजा दशैंपछि प्रकाशन हुने